အေးချမ်းတယ်... တိတ်ဆိတ်တယ်.. သာယာတယ်...ရူမျော်ခင်းတွေနဲ့ သိပ်လှတယ်.. နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတယ်.. နွေးထွေးတယ်.. စတဲ့ နာမည်တပ်စရာ ဂုဏ်ပုဒ်တွေများတဲ့ ဒီမြို့လေးဟာ ကိုယ့်အတွက်တော့ ဘယ်နှစ်ခေါက်ရောက်ရောက် ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အေးမြနေတုန်းပါပဲ.. အရင်ကတော့ အလုပ်အတွက်ခနခနရောက်ခဲ့လို ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရဲ့ မြို့လေးတွေဟာ ကိုယ့်အတွက်တော့ ဒုတိယအိမ်တွေလို ဖြစ်ခဲ့ပေမယ်.. အဲ့ဒီအလုပ်က ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ထဲက ခြေဦးမလှည့်ဖြစ်တော့တာ ၅ နှစ်လောက်တောင်ရှိတော့မယ်.. ကိုယ့်မယ်လဲနိုင်ငံတကာသာ ခရီးဆန့်နေရတာ ကိုယ့်နိုင်ငံထဲထဲက မြို့တွေကို နီးရက်နဲ့ဝေးနေခဲ့သလိုဖြစ်နေတယ်..
My Khayee က ချီလီက အမရေ ကလောလိုက်မလား သူသွားစရာရှိလို့ ဆိုပြီးလာပြောတော့.. မြန်မာပြည်ထဲတော့ ပင်ပင်ပန်းပန်းခရီးမထွက်ချင်ပါဘူး လို့သူ့ကို ပြန်ပြောမိတယ်.. သူသွားမယ်ဆိုတော့ Trekking ပဲ ထင်လိုက်လို့ ကလော Trekking တွေဆိုတာက လဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ရ နှစ်လောက်ထဲက ၅ ခေါက်ထက်မနည်း ကိုယ်လျှောက်ခဲ့ ပြီးပီဆိုတော့ မလိုက်ချင်တော့တာ.. သူက မဟုတ်ဘူး မရေ.. ဒီတစ်ခါနေ ရမယ့် ဟိုတယ်က အမိုက်စား အဲ့ဒီမှာ ပဲ အေးဆေး နှစ်ညလောက်နားနေလို့ရတယ်ဆိုပြီး ဟိုတယ် နာမည်ပြောတော့ ကိုယ်လဲ ရှာကြည့်လိုက်တော့ ..အေးလိုက်မယ် ဆိုပြီး ချက်ချင်းဖြစ်သွားတယ်.. ဒါနဲ့ပဲ ကလောကို သွားဖို့ ထွက်လာခဲ့တာပေါ့.. မြန်မာပြည်ထဲ ခရီးမထွက်တာ ကြာတော့ ရင်တွေတောင်ခုန်နေတယ်..
မနက်အစောကြီးရောက်တော့ ကိုယ်တွေနေမယ့် ဟိုတယ်ကို သွားတာ …ကလောမြို့လေးက အေးအေးချမ်းချမ်းလေး အိပ်မောကျနေတုန်း ပေါ့.. ဟိုတယ်ဝင်းထဲ မှာ ကားပေါ်က ဆင်းတော့ ပထမဦဆုံး ရလိုက်တဲ့ အနံက မာကလာသီးနံ လေးတွေ.. ကိုယ်က မာကလာသိပ်ကြိုက်တော့ အနံရတာနဲ့တင် အပင် ဘယ်မှာလဲရှာလိုက်တော့ မြေပြင်မှာ တင် မာကလာသီး မှည့်တွေ ဖွေးဖွေးလူပ်ကျနေတာ.. ဒါဟာ အရင်က ကိုယ်မြင်ဖူးနေကျ ကလောပဲ.. ကိုယ်တွေ မြန်မာ ပြည်ရဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေး.. တခြား ဘယ်နိုင်ငံမှာ မှမရနိုင်တဲ့ အငွေ့အသက်တွေ.. အသီးအနှံတွေ ပေါ.. ရာသီဥတု အေးစိမ့်စိမ့် နဲံ တိတိဆိတ်ငြိမ်သက်နေတာ.. မာကလာသီး လေးငါး လုံးလောက် ရွေးကောက်ပြီး အိတ်ထဲ ထည့်လိုက်တော့ ကိုကို က ဘာလုပ်မို့လဲ မေးတယ်.. စားမို့ပေါ့လို့ ပြန်ဖြေရင်း အကျီင်္နဲ့ သုတ် .. ပိုးတွေရှောင် ပြီး တစ်ကိုက်ကိုက်လိုက်တယ်.. အားပါးပါး... အူနီသီး ဗျ.. အပင်ကနေ ကြွေကျတဲ့ မှည့်ဝင်းနေတဲ့ အူနီသီးက ချိုနေတာပဲ.. အူနီသီး ပင်ဆိုတာ တွေ့ရခဲတယ်.. ငယ်ငယ်က မာကလာပင်တွေ လိုက်တက်ရင် အူနီသီးပင်တွေ့ရင် ဘယ်လိုပျော်မှန်းမသိဘူး.. အခုတော့ ကိုယ်နေတဲ့ ဟိုတယ်မှာ တင် အူနီသီးပင်ရှိနေတော့ ဒါဟာ ကိုယ့်ငယ်ဘဝကို ပြန်လည်ရရှိသလိုပဲ.. အမှန်က အဲ့ဒီ ၀င်းထဲမှာ အူနီသီး ပင် နှစ်ပင်တောင် ရှိတယ်ဆရာ..
Royal Kalaw Hill Resortးဒီဟိုတယ်လေးနာမည်ပေါ့.. သူ့မှာပင်မအဆောက်အဦးကြီးတစ်ခုရှိတယ်.. အဲ့ဒီပုံကို မြင်ပြီး တခြားခရီးစဉ်တွေနောက်ရွေ့ပြီး ဒီကိုလိုက်လာခဲ့တာ.. သိပ်လှတယ်.. သိပ်ခမ်းနားတယ်. ကိုလိုနီခေတ်က အဆောက်အဦးကြီး ၁၉ ၂၈ က ဆောက်ခဲ့တာဆိုတော့ နှစ် ၁၀၀ ရာတောင်ပြည့်တော့မှာ.. ဆောက်လုပ်ခဲ့တာကတော့ Sir.William လို့ခေါ်တဲ့ ဘိလပ်က အင်္ဂလိပ်ကြီး နဲ့သူ့ရဲ့ဇနီး မွန်အမျိုးသမီးမခင်ဆိုသူက သူတို့ရဲ့ နွေရာသီ စံအိမ်တော် အဖြစ်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာပါ.. လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှ စော်ဘွားတွေကို ရောင်းချခဲ့တာ.. .အဲ့ဒီ အဆောက်အဥိးဝင်ဝင်ချင်းမှာလဲ သူတို့မောင်နှံရဲ့ပုံနဲ့ သူတို့အကြောင်းကို မှန်ဘောင်နဲ့သွင်းပြီးပြထာတယ်.. တကယ်တော့ ကလောမှာ အဲ့လို ကိုလိုနီခေတ်က အဆောက်အဦးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်.. ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ ၄၀၀၀ ကျော်မှာ တည်ရှိပီး စိုစွတ်အေးမြတဲ့ရာသီဥတု ကိုပိုင်ဆိုင်ထားလို့ အင်္ဂလန်ရဲ့ ရာသီဥတုနဲ့ တူညီနေလို့့ အင်္ဂလိပ်တွေဟာ ဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းက တောင်ပေါ်မြို့လေးကို မျက်စိကျခဲ့ပုံရပါတယ်.. .ဒါကြောင့်လဲဒီလို အဆောက်အဦးတွေ အများအပြားတည်ရှိနေပြီး သူတို့နဲ့ တူတူပါလာတဲ့ ဂေါ်တခါး လူမျိုးတွေ လဲ ကျန်ရစ်ပြီး နေထိုင်နေကြတာပေါ့လေ...
ဒီ ဟိုတယ်ဟာ ခမ်းနားလှပတဲ့အပြင် Photogentic လဲဖြစ်သေးတယ်.. အခန်းလေးတွေ ပြတင်းပေါက်လေးတွေ.. အားလုံးကို အဖြူရောင်လေးတွေနဲ့မို့ သန့်ပြီး သစ်လွင်နေတယ်.. ပန်းရုံလေးတွေ ဒန်းလေးတွေနဲ့ အပြင်အဆင်လေးတွေကိုက ကိုယ်ဥရောပမှာ မြင်နေကြဖြစ်တဲ့ အိမ်လေးတွေလိုပဲ... အိမ်မကြီးရှေ့မှာ မြက်ခင်းပြင်အကျယ်ကြီးရှိတယ်... ထင်းရူးပင်တွေကလဲနေရာတိုင်းမှာ...စက်ဘီးလေးတွေလဲငှားစီးလို့ရသေးတယ်....သူက အခန်းတွေအများကြီးမရှိဘူးရယ်.. အိမ်မကြီးမှာ သုံးခန်းနဲ့ တခြား ဘန်ဂလိုလေးတွေမှာ ၁၁ ခန်းဒါပဲရှိတာ.. အိမ်မကြီးမှာ နေချင်ရင်တော့စျေးကြီးတယ်.. ကိုလိုနီအဆောက်အဦးမှာနေရင်တော့ ဒီလိုစျေးပေးရမှာပေါ့လေ.. တစ်ခန်းကို တည 200$ ကျော်ကျော်လောက်ရှိတယ်.. တခြား ဘန်ဂလို အခန်းတွေကတော့ resort လို အနေအထားနဲ့ဆိုရင် သိပ်စျေးမကြီးလှဘူးရယ်.. တညကို 100$ စွန်းစွန်းလေးပဲရှိပါတယ်..
သုံးရက်တိတိအေးဆေး ဟိုတယ်မှာ အနားယူဖို့လာခဲ့တော့ တခြားအဝေးကြီးတွေလျှောက်မသွားချင်လို့ အနီးအနားက ကော်ဖီဆိိုင်လေးတွေ ထိုင်ရင်း အေးချမ်းတဲ့ ကလော မြို့လေးကိုပဲ ကိုယ်လျှောက်ကြည့်ခဲ့တယ်..ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ မြို့သေးလေးကို ပတ်နေတာ.. ရာသီဥတုကအေးနေတော့ ဆိုင်ကယ်စီးလို့သိပ်ကောင်းတာပဲ. တကယ်တော့ ကလောဆိုတာ ကိုယ့် အချစ်နဲ့ သွားလို့အကောင်းဆုံးနေရာပဲ.. ကို်ယ်ဆို ခနလောက် ကိုရီးယားကို ပြန်ရောက်သွားသလိုပဲ.. ကလောမြို့တဝိုက် တခြားသွားစရာတွေကတော့ My Khayee ချီလီ ရေးထားတာ ဒီမှာ ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်.. https://www.facebook.com/mykhayee/posts/1115938031886242 ကိုယ်ကတော့ အေးဆေးလေးနေချင်တာ နဲ့ မြို့လေးထဲရယ် ကိုယ်အရင်ခနခနသွားဖူးခဲ့တဲ့ ပလောင်ရွာလေးကို သတိရလို့ ပြန်သွားခဲ့တယ်.. ကိုယ်လို့ပဲ Trekking တွေမသွားချင်ပဲ ..ဒါမှမဟုတ်..Trekking သွားပြီးပြန်လာလို့ ကလောမြို့လေး နဲ့ သူ့ရဲ့ အေးဆေးတဲ့ ရာသီဥတုလေးကို ကော်ဖီသောက်ရင်းကြည့်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်..လျှောက်သွားဖို့ ဆိုင်ကယ်ကတော့ ဟိုတယ်ကနေ ငှားလိုက်တယ်.. တစ်စီးကို ၁ သောင်းခွဲပေးရတယ်.. တစ်နေ့သုံးလို့ရတယ်.. ဆီတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ထည့်ရတာပေါ့.. .
Kalaw Cafe : ဒီနောက်ပိုင်းခေတ်စားလာတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးပေါ့.. သူရဲ့အဝင်အဝလေးက instrangammable ဖြစ်တဲ့နေရာလေး..တော်တော်များများလဲ အဲ့ဒီကော်ဖီဆိုင်လေးကိုသွားထိုင်ကြတယ်.. ကော်ဖီကတော့ သိပ်အကောင်းကြီမဟုတ်ဘူး.. သို့်ပေမယ့် နေရာလေးက ချစ်စရာလေး...အပေါ်ထပ်ကနေဆို ဟိုဘက်ခြံက ထော်ပတ်သီး ပင်တွေလှမ်းမြင်နေရတယ်..
ကလောစျေး : မနက်ခင်းတွေဆို ကလောစျေးထဲမှာ ပတ်နေရတာ ကြိုက််တယ်.. ထောပတ်သီး ..လိမ္မော်သီး.. ပန်းသီးပိစိလေးတွေ.. ကြက်သွန်ဖြူအထုပ်ကြီး..လက်ဖက်ခြောက်..တိုဖူးခြောက်တွေ.. အဲ့ဒါတွေ မြင်နေရတာကို စိတ်ချမ်းသာတာ.. စားသောက်တန်းတွေဘက်ဝင်လိုက်ပြီဆို ကိုယ့်ခြေထောက်တွေ ပြန်လှည့်ထွက်လို့မရတော့ဘူး.. .. အမဘာရလဲလို့မေးလိုက်ရင်.. တို့ဖူးနွေး..ဆန်စီး..ရေစိမ်.. ငါးထမင်းနယ်.. ဟင်းထုပ်.. ၀က်သာချဉ်.. လို့သူတို့ရွတ်ပြရင်.. ရှိတာသာအကုန်ချလို့ ကိုယ်ပြောလိုက်တော့ သူတို့မျက်လုံးပြူးတယ်.. လေးယောက်စားတာ ၁၁ ပွဲကို ၅၃၀၀ ဆိုတော့ ကိုယ်တွေတခါ မျက်လုံးပြန်ပြူးသွားရော.. အဲ့လို တန်ပြီး အရသာရှိလှတဲ့ ကလောစျေးကို်ကိုယ်မနက်တိုင်းရောက်တာ အဆန်းမဟုတ်ဘူး.. အရင်ကဆို ကလော ဘာလို့သွားချင်လဲလို့ မေးရင် ကလောစျေးကြောင့်လို့ ကိုယ်အမြဲဖြေတယ်.. ဂျုးမြစ်လေးကိုက်ပြီး ငါးထမင်းနယ်ကို ရေနွေးပူပူလေးနဲ့ မူတ်ပြီးသောက်ရတာကိုယ့် အသဲစွဲပဲ..
Kalaw Heritage Hotel : အရင်ကတော့ Kalaw Hotel ပေါ့.. သူကလဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့နောက်တနေရာပေါ့.. သိပ်လှတဲ့ အဆောက်အဦးကြီး နှစ်ခုရှိတယ်.. တစ်ခုက ၁၉၀၃ မှာဆောက်ခဲ့ပြီး နောက်တစ်ခုက ၁၉၀၄ မှာဆောက်ခဲ့တာ ဆိုတော့ နှစ်တရာကျော်နေပြီ.. ထူးဆန်းတာတစ်ခုကတော့ သူက စဆောက်ပြီးထဲက ဟိုတယ် ဖွင့်ခဲ့တာ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဒုတိယ ဟိုတယ်ပဲ.. အရန်ကုန်မှာ strand hotel တစ်ခုသာရှိခဲ့ပြီး ကလောမှာ အဲ့ဒီခေတ်က ဟိုတယ်လာဖွင့်ခဲ့တာဆိုတော့.. ကိုယ့်မှာ ကလောမြို့လေးရဲ့ ခေတ်မှီပုံတွေတွေးနေမိတယ်.. ကော်ဖီက တော်တော်ကောင်းတာ.. တခြားအစားအစာတွေလဲမှာစားလို့ရတယ်.. သူ့မှာလဲ ကိုလိုနီခေတ်အတိုင်း အဖြူရောင်တွေများများသုံးထားတယ်.. ကော်ဖီပူလေး သောက်ရင်း မိုးအုပ်အုပ်လေး ကြားမှာ ရာသီဥတုက အေးစိမ့်လို့ပေါ့.. ရထားက ဥသြစွဲပြီး ဟိုတယ် ဘေးနားက ဖြတ်သွာတော့ ဘာကို လွမ်းမိမှန်းမသိဘုူရယ်.. ညဘက်မှာထိုင်လို့ရတဲ့ ဘားလဲရှိတယ်.. ဟိုးခေတ်ထဲက ရေနွေးငွေ့စက်အကြီးကြီးကို အလှပြထားတယ်..
New Simple Life: ဒါလေးကလဲ ကော်ဖီဆိုင်လေးပါပဲ.. သူကတော့ လျိုစောင်းလေးမှာဆောက်ထားတာ.. အပေါ်ကိုမော့ကြည့်လိုက်ရင်ထင်းရူပင်တွေအများကြီးရှိတယ်.. ဆိုင်လေးရဲ့ပြတင်းပေါက်လေးတွေကိုကိုယ်တော်တော်ကြွေတယ်.. ဓါတ်ပုံရိုက်ရင် ကို်ရီးယားက ကော်ဖီဆိုင်လေးတွေလိုပဲ.. ကိုယ်တွေသွားတဲ့အချိန်လူတေ်ာတော်ရှင်းနေတော့ အေးဆေးစကားလေးပြော ပြီးကော်ဖီသောက်ခဲ့တာပေါ့.. ပီဇာတွေလဲရတယ်.. ဂစ်တာလေးတစ်လုံးချိတ်ပေးထားလို့ ဝါသနာပါရင် စမ်းကြည့်လို့ရတယ်.. အင်္ဂါနေ့တိုင်းဆိုင်ပိတ်တယ်..
ကလောဘူတာ : ဒီဘူတာလေးမှာတော်တော်များများလဲသွားရိုက်ပြီးကျလောက်ပါပြီ.. ဒီလောက်ထိ photogenic ဖြစ်မယ်လို့မထင်ထားမိဘူးရယ်.. ဘူတာလေးကချစ်စရာလေး.. ဥရောပ ရွာလေးတွေက ဘူတာရုံလေးတွေနဲ့တောင်တူတယ်.. ရထားကလဲ သိပ်မလာတော့ လူတွေကရှင်းနေရောပဲ.. ဓါတ်ဖမ်းလို့ကောင်းမှကောင်းပဲ..
Sprouting Seeds Cafe & Bakery : ဒါလေးကတော့ ကော်ဖီဆိုင်ထက်ကို ပိုတယ်လို့ပြောရမယ်.. သူကလူငယ်လေးတွေအတွက်ဘဝတိုးတက်ဖို့ Cooking နဲ့ Bakery အပြင်တခြားသင်တန်းလေးတွေပို့ချရာနေရာလဲဖြစ်တယ်.. ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတဲ့ Social Enterprise လေးတစ်ခုလဲဖြစ်တယ်.. ဆိုင်ရှင်က အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားကျောင်းဆရာ.. သူနဲ့အတူ သူ့သမီးလဲ ဒီဆိုင်ကို ကြီးကြပ်တယ်.. Exchange Program အနေနဲ့ ကချင်ပြည်နယ်က ကလေးတွေလဲသူ့ဆီမှာလာသင်ကြတယ်.. အခုဆိုရင် TripAdvisor မှာ rate ကောင်းကောင်းတွေရနေပြီဖြစ်လို့ လဲ အဲ့ဒီဆိုင်ကို အဖြူတွေတော်တော်လာကြတယ်.. ကိုယ်တွေညနေပိုင်းသွားထိုင်တော့ မြန်မာတစ်ယောက်မှတောင်မရှိဘူး.. အကုန် ဘိုတွေကြီးပဲ.. သူတို့နဲ့စကားတွေပြော..သူတို့က ကိုယ့်ကို မြန်မာပြည်အကြောင်းမေးနဲ့ ကိုယ့်ဟာကို ကလောရောက်နေတယ်ဆိုတာတောင်မေ့သွားတယ်. သူတို့က ကလောကို သိပ်ကြိုက်ကြောင်း trekking တွေမိုက်ကြောင်း သူတို့နိုင်ငံတွေအကြောင်းပြောကြနဲ့ ညနေခင်းဟာ စိုပြေနေတာပေါ့.. Pop သီချင်းလေးတွေလဲဖွင့်ထားသေးတယ်... တော်တော်ကြာအချိန်ဖြန်းခဲ့တဲ့ဒီဆိုင်လေးကို ကို်ယ်ကြိုက်တယ်.. အရှေ့မှာလဲ ဘုရာကျောင်းကြီးကတော်တော်လှတယ်.. ဆိုင်လေးမှာ ထောပတ်သီးကို ဆလတ်လိုမျိုးလုပ်ပြီး ပါမုန့်နဲ့တွဲစားရတာကို အရမ်းကြိုက်ပဲ..ထောပတ်သီးကို ဒီအတိုင်းထိုင်စားရတာလဲကြိုက်တယ််.. တခြား muffin တွေလဲရတယ်.. သူကတော့ တနလာင်္နေ့တိုင်းဆိုင်ပိတ်ပြီး ညဘက် ရနာရီလောက်အထိဖွင့်တယ်.. ၀ိုင်တို့ ဘီယာတို့မရပေမယ့် အပြင်ကယူလာပြီး သောက်ရင်တော့ရတယ်.. ပိုင်ရှင် ဘိုကြီး ကိုယ်တိုင် ချက်ပေးတာ ဆိုတော့ စွန်းကောင်းပဲ...
Red House : ဒါကတော့ ညဘက်ကိုယ်တွေအဖွဲ့ ၀ိုင်သွားသောက်တဲ့နေရာလေးပေါ့.. နေပါလီဆိုင်ကနေ ချာပါတီနဲ့ ကြက်သားဟင်းကို ဆွဲ.. နှစ်၁၃၀ ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Mandalay Beer သောက်ပြီး အဲ့ဒီဘားလေးကိုချီတက်ကြတာ.. ဆိုင်ကတော်တော်ကျယ်တယ်.. ပိုင်ရှင်ကလဲ အီတလီလူမျိုး Milan ကပေါ့.. ဆိုင်ကလဲပြင်ထားတာမိုက်တယ်.. အပြင်ဘက်မှာထိုင်ရင်လေတိုက်ပြီးရာသီဥတုကတော်တော်လေးအေးတယ်.. ဒါပေမယ့်ဝိုင်လေးရီဝေဝေနဲ့ဆိုတော့ မိုက်တာပေါ့.. နောက်ထပ်ကြိုက်တာတစ်ခုက ပီဇာဖိုကြီးက ဆိုင်ရှေ့မှာ.. ကိုယ်ရှေ့မှာတင် ပီဇာတွေကို ဖုတ်ပေးတာ.. ကိုယ်ဆိုသွားသွားစပ်စုပြီး အီတလီကြီးနဲ့ သွားစကားပြောပြီး ဘယ်ပီဇာကောင်းလဲမေးတယ်.. ကိုယ်တွေစားခဲ့တာ Four Season ပီဇာတဲ့.. ပီဇာတစ်ချပ်ထဲကို လေးမျိုး.. လုနေကြတာ .. ဆိုင်လေးက ညဘက် ၁၀နာရီလောက်ထိဖွင့်တော့ ကလောမှာညဘက် အပြင်ထွက်ချင်ရင်ဒီဆိုင်လေးကအတော်ပဲ.. စည်ဘီယာတွေရော.. ကော့တေးတွေလဲရတယ်.. ရန်ကုန်ကို လွမ်းလို့ ဘားထိုင်ချင်ရင် ကလောရာသီဥတုနဲ့ ဒီဆိုင်လေးကအတော်ပဲ..
ပိန္ဒဲပင် ရွာလေး. : ကိုယ်အရမ်းကြိုက်တဲ့ ကလောနားက ပလောင်ရွာလေး ပေါ့.. သိပ်လှတယ်.. ရွာတည်ထားတာ တောင်စောင်းလေးမှာ.. သူ့ရွာမရောက်ခင်အဝေးထဲက တောင်စောင်းကရွာလေးကို သစ်ပင်တွေကြားကလှမ်းမြင်နိုင်တယ်.. ရွာလေးကလှသလို ရွာကိုသွားတဲ့လမ်းကလေးကတော်တော်လေးလှတယ်.. ဘေးမှာ လိမ္မော်ခြံတွေ.. ဂေါ်ဖီခင်းတွေ.. ထောပတ်သီးပင်တွေ.. ခရမ်းချဉ်သီးပင်.. နာနတ်သီးခင်းတွေ.. အများကြီးပဲ.. ဟိုး အရင်ကတော့ ဒီလမ်းဟာ အဖြူတွေ Light Trekking လျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းပေါ့.. အဲ့တုန်းကဆို မြန်မာတွေတောင်ဒီလို မလျှောက်ကြသေးဘူး.. အခုတော့ ကားလမ်းပါပေါက်သွားပြီဆိုတော့ အရင်လို ဒီလမ်းကို မလျှောက်ကြတော့ဘူး.. ဒီတခေါက်လဲ ဒီရွာလေးကို သတိရလို့ ကိုယ်ပြန်သွားခဲ့တာ.. ကလောကနေ ဆိုင်ကယ်နဲ့ သိပ်မဝေးတော့ ဘူး.. မိနစ် နှစိဆယိလောက်ပဲ မောင်းရတယ်.. Trekking မလျှောက်ချင်ပဲ ကလောရဲ့ တောလမ်းနဲ့ ရွာလေးကို ကြည့်ချင်ရင် ဒီကိုသွားလိုု့ရတယ်..အောင်ပန်းအထွက် လမ်းကကလောမြို့မှာ ကြိုဆိုပါတယ် ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ရောက်ရင် ဘယ်ဘက်ချိုးလိုက်ရုံပဲ... မြင်းကရွာလေးကို အရင်ရောက်မယ်.. ဒီရွာလေးကလဲ အရင်က ကလောမှာ ရုပ်ရှင်တွေလာလာရိုက်နေကြရွာလေးနဲ့တူတယ်.. သူ့ဆီကနေ ထွက်လာတာ နဲ့ စိုက်ခင်းတွေ မျိုးစုံတွေ့လိမ့်မယ်.. သိပ်လှတာပဲ.. တောင်တွေ အထပ်ထပ်ပေါ်က စိုက်ခင်းတွေ.. လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေကြတဲ့ ပလောင်ရွာသူတွေလဲတွေ့ရမှာ.. အရမ်းလှလို့ ဆိုင်ကယ်ရပ်လိုက်ရိုက်လိုက်နဲ့ မိနစ် ၂၀ လောက်ပဲမောင်းရတဲ့လမ်းကို တစ်နာရီလောက်ကြာသွားတယ်.. လိမ္မော်ခင်းတွေဆိုတာ တောင်စောင်းတွေမှာ အများကြီးပဲ.. လိမ္မော်သီးမှည့်တွေ အပင်အောက်မှာ အတုန်းအရုန်းကြွေကျနေတာများ မြင်မကောင်းဘူးရယ်.. ကိုယ်တွေလဲ အခင်းထဲဝင် ဓါတ်ပုံတွေရိုက်.. သူတို့အပင်တွေတော့ မထိအောင်ဂရုစိုက်ရတယ်.. အခင်းရှင်တွေ့တော့ ရောင်းလားဆိုတော့ ရောင်းတယ်တဲ့ တစ်လုံး ၁၅၀ တဲ့.. မှည့်တာခူးလို့ရတယ်တဲ့... လေးငါးလုံးလောက် မှည့်တာ လေးတွေဝယ်.. အပင်အောက်မှာကြွေနေတာတွေတော့ ပိုက်ဆံမယူဖူး ..အလကားစားလို့ရတယ်.. ကိုယ်လဲ ၃..၄ လုံးလောက် ကောက်စားရင်း ဓါတ်ပုံတွေလှည့်ပတ်ရိုက်.. လိမော်ပင်အောက် ကကြွေကျတဲ့ အသီးစားရတဲ့ အရသာကတော့ ဘာပြောကောင်းမလဲ.. မြို့ကြီးပြကြီးမှာ ဒီလို feeling မျိုးဘယ်ရလိမ့်မလဲ.. . .. ဆိုင်ကယ်ဆက်မောင်းလာတော့ ကျောက်ခဲတွေနဲ့ လမ်းကတော့ နည်းနည်းခုန်တယ်.. ရွာလေးကို လှမ်းမြင်နေရတော့ ဓါတ်ပုံတွေ ဆင်းရိုက်ပြန်ရော.. ရွာထိပ်က အပင်ကြီး ကတော့ အရင်ကအတိုင်းပဲ.. ကလေးတွေကလဲ အရင်လို အုပ်စုလိုက်ပဲ.. ကိုယ်တွေနားကို ကပ်လာပြီး သူတို့ အိမ်လိုက်လည်ဖို့ခေါ်တယ်.. သူတို့ အိမ်တွေမှာ ပလောင်ထည်တွေ ယက်တာရှိတယ်.. သူတို့ရောင်းတယ်.. လက်ဖက်ခြောက်တွေ.. လွယ်အိတ်တွေရောပဲ.. ကိုယ်မလို ပေမယ့် ဒေသခံတွေ နဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အားပေးရမယ်မဟုတ်လား... သူတို့ရွာကို လှလို့ ကိုယ်တွေက လာကြည့်ပြီး ဓါတ်ဖမ်းပြီးပြန်လို့ရပေမယ့် ဖုန်းလိုင်းမမိတဲ့ ဒီလိုရွာလေးတွေ ရောက်ရင်ဒေသခံ ပစ္စည်းလေးတွေကို တတ်နိုင်သလောက် အားပေးဖြစ်တယ်.. အိမ်ပြန်ရင် လက်ဆောင်ပေးလို့လဲရတယ်လေ.. ပလောင်အဖွားက သူ့လက်ဖက်ခြောက်တွေ.. လွယ်အိတ်တွေဝယ်လို့ထင်တယ်.. ပလောင်အကျီင်္လေးပေးဝတ်တယ်.. ကိုယ်လဲ အကျီင်္လေးဝတ် .တောင်တန်းတွေနဲ့ ဓါတ်ဖမ်း ကျေနပ်ပေါ့.. ကလေးတွေကလဲ ဧည့်သည်မလာတာ ကြာလို့လားမသိဘူး ကိုယ့်နားမှာ ၀ိုင်းနေတာပဲ.. သူတို့ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပေး..ပြန်ပြတော့ ပျော်နေကြတာများ.. ကိုယ့်ရင်ကို ရာသီဥတု နဲ့ အပြိုင်အေးမြစေတဲ့ နေ့လေးတနေ့ပေါ့.. အပြန်ကြတော့ တာ့တာတွေပြပြီး ရွာလေးက အနောက်မှာ ကျန်ခဲ့တယ်..
ဒီရွာလေးကို သွားလည်ရင် လမ်းက စိုက်ခင်းတွေကို မဖျက်ဆီးပါနဲ့.. သူတို့ရဲ့ ၀မ်းစာတွေပါ.. ဓါတ်ပုံရိုက်လဲ ဝေးဝေးကနေ ရိုက်ပါ.. လိမ္မော်သီးတွေလဲ ဒီအတိုင်းအပင်ကနေ ခူးမပစ်ပါနဲ့ ..ကိုယ့်ရဲ့ တဒင်္ဂ စိတ်ကျေနပ်မူအတွက်နဲ့ သူတပါးရဲ့ ချွေးနဲ့တယုတယ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ သီးနှံတွေကို အလဟသမဖြစ်ပါစေနဲံ.. တိုင်းရင်းသားတွေကို ချစ်ပါ.. အရမ်းရိုးသားပြီး ဖြူစင်ကြတယ်.. သူတို့နဲ့ စကားပြောပါ.. သူတို့မှာ သူတို့ရွာအကြောင်း..သီးနှံတွေ အကြောင်း .. သူတို့ရဲ့လက်မူထုတ်ကုန်တွေအကြောင်းပြောစရာတွေအများကြီးပါ... ဒေသထွက် ထုတ်ကုန်တွေကို အားပေးပါ.
ဒါတွေကတော့ ကိုယ်သုံးရက်တာ ကလောမြို့လေးမှာ အချိန်ဖြုန်းခဲ့ နေရာလေးတွေပါ.. ပြန်သာလာရပေမယ့် လုံးဝကို မပြန်ချင်ခဲ့ဘူး..ထင်းရူပင်တွေဝိုင်းနေတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေး.. အေးချမ်းတဲ့ရာသီဥတုလေး.. ဆိုင်ကယ်စီးလို့သိပ်ကောင်းတဲ့ တောင်တက်တောင်ဆင်းလမ်းလေးတွေ.. သိပ်လှတဲ့ကို်ယ်တွေနေခဲ့တဲ့ ဟိုတယ်လေး.. ကော်ဖီဆိုင်လေးတွေ..တောင်စောင်းကရွာလေး..ပလောင်ကလေးလေးတွေ.. လိမ္မော်ခင်းတွေ နဲ့ ကလောစျေးထဲက ရှမ်းစာ ပေါင်းစုံ ကတော့ ကိုယ်အမြဲလွမ်းနေမယ့် အရာလေးတွေပေါ့..
ဓါတ်ပုံတွေကိုတော့ Samsung Galaxy Note 8 နှင့် Fuji Film XA3တို့နဲ့ရိုက်ကူးထားပါတယ်...